Colombia: Tratra ny fitsikilovana ara-pifandraisana tsy manara-dalana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2009 12:56 GMT
Tamin’ny herinandro lasa teo, nabaribari n’ny Semana news magazine fa ireo mpiasa sasany tao amin’ny birao misahana ny fiarovana (DAS ny raikipohy amin’ny teny Espaniola), « polisy miafina » an’i Colombia, dia efa nihaino tsy manara-dalana mpanao politika, mpanao gazety, mpitsara, manampahaizana, ary – tamin’ity indray toraka ity – dia ny mpiandraikitra ao amin’ny governemanta mihitsy izay tena akaiky an’i Filoha Alvaro Uribe, koa anisan’izany koa ny Sekreterany manokana ara-dalana sy ny mpiandraikitra avy ao amin’ny birao misahana ny fiambenana azy manokana. Ny ratsy indrindra, araka ny voalaza ao amin’ny boky mpiseho isan’andro (magasine), dia toa hoe namidin’ireto polisy sasantsasany tamin’ny « mpanera govana » dia ny mpiady anatu akata mpiantafika na mpandraharahan'ny rongony, ireo loharanom-baovao azo avy tamin’ny horonam-peo an-telefonina tsy ara-dalana. Teo anelanelan’ny 19 -21 Janoary dia nopotehina[es] ny ankamaroan’ireo horonam-peo araka ny feon’ity vaovao mpiseho isan’andro (magazine) ity. Nanakoako tokoa ny tantara ny Asabotsy vao maraina tamin’ny alalan’ny fampielezam-baovao hafa raha vao nitotona teny an-tsena ireto magazine ireto.
Tamin’ny Alahady, nanao fisavana ny ivo-toeran’ny DAS ireo mpiandraikitra avy ao amin’ny Hery Fitsirihana ara-teknika (CTI ny raikipohy amin’ny teny Espaniola), nahatonga fifandirana [es] teo amin’ny vondrona roa tonta izany. Taty aoriana, nesorina tamin’ny toerany ny mpitondra voalohany ambony grady indrindra tao amin’ny DAS. Nandefa filazana[es] mitaky ny valin-teny avy amin’ny Mpisolo Vava Ambony ny Fitsarna Ambony. Nanome tsiny ny governemanta ny mpanohitra tamin’ireo horonam-peo. Nambara [es]fa tsy nisy akory ny toe-javatra ao ambadiky ny mailaka anterineto ka mahakasika ity fitsirihana ity. Tsy nanaiky izany ny Filoha Uribe, milaza izy fa anisan’ny “tratra”n’izany ihany koa azy izy, ary manameloka izanyho an’ny “jiolahy mafia” avy ao anatin’ny DAS. Milaza kosa ny minisitry ny fiarovam-pirenena Juan Manuel Santos fa tiany hosarahana ny birao fitsikilovana, fa ny governemant ihany no mitsipaka ilay heviny.
Tsy vaovao ny fandraisam-peo amina horonana (fantatra amin’ny teny hoe “chuzadas” amin’ny teny Espaniola avy ao Colombia) ao amin’ny fitondran’I Filoha Uribe. Tamin’ny volana Mey 2007, namoaka ankarihary horonam-peon’ireo sefon’ny mpiantafika izay tao am-ponja miresaka famonona, ary taorian’izay dia hita fa maro ireo horonam-peo tsy ara-dalana karakarain’ny antoko mpitsikilon’ny polisy ikoizana iray. Vokatr’izany, nesorin’I Uribe ny mpitondra polisy miisa 14, ary nametraka an’I jeneraly Oscar Naranjo ho talen’ny polisy nasionaly vaovao sy amperin’asa izy. Tamin’ny faran’ny 2008, nanambara ny Senatera sisa tavela Gustavo Petro (mpiady tamin’ny M-19 guerilla teo aloha) fa izy sy ny antokony dia efa nanjakain’ny olona avy amin’ny DAS nanomboka tamin’ny volana Aogostra ary efa namoaka ankarihary ireo resaka fifandraisana anaty anankiroa nomen’ny sefon’ny DAS. Nitsoaka an-daharana anefa ny tale sy ny mpitondra ambany grady, mpanafatra ity “farany” ity. Ao anatin’ireo toe-javatra roa ireo, dia manda tanteraka ny fidirana an-tsehatra ny governemanta.
Manoratra momba ny tenin’I Uribe I Sentido Cumun sy Charly mikasika ity savorovoro. Miahiahy ny fandriam-pahaleman’ny firenena I Sentido Común [es]
Raha teraka ny teoria mizirizirin’I Uribe mikasika ny fisian’ny mafia ao anatin’ny governemanta, dia hibaribary avy hatrany ny mahakely ny hery ahafahan’ny governemanta manampy ny fanaraha-maso ao anatin’ny birao miafin’ny firenena, tarehin-javatra izay mety hampiseho ny tsy fisian’ny fiarovana mahakasika indrindra ny fandriampahalemana amin’ny lafiny maro izany; tsy ho resahina ny voka-dratsy goavana ateraky ny firaisana miaraka amin’ny fikambanana mafia, izay efa tafiditra ao anatin’ny governemanta.
Etsy andaniny, manjary tsy ananan’I Charly [es]firy intsony ny fahatokisana ho an’ny governemanta ary manontany izy hoe fa iza no ao ambadik’izao rehetra izao:
Izaho kosa aloha tsy andeha hividy ireo tantara milaza fa ny mpitondra ambany avy amin’ny DAS dia miasa irery ary governemanta no lasibatry ny ketrika natao. Manoloana ny savorovoro goavana isika, izay misy ifandraisany amin’ny toe-draharahan’I [Jorge] Norguera [talen’nyDAS teo aloha voalaza fa niray tsikombakomba tamin’ny mpiantafika] ary asehon’ny DIPOL [ilay birao polisy fitsirihana] (izay nahatonga ny tsy fahaiza-mitondran’ireoJeneraly maro) fa rariny ny mety hisian’ny krizina demokrasia, izay ady manohitra ny fomba fijery sy ny fahalalahana ao Kolombia.
Mametraka fanontaniana [es]ao amin’ny Realidades Colombianas I Valentina Diaz:
Milaza ny fiadidiana sy ny DAS fa tsy nanao izany. Tsy nisy na dia iray tao amin’ny mpitodra ambony na tao amin’ny sampan-draharaha miafina no nibaiko mba hanao fihainoana antsokosoko ny vondron’olona voafantina izay manohitra ny governemanta. Fanontaniana: Moa ve ny olona tsirairay ao amin’ny governemanta dia manao izay saim-pantany? Misy ve ireo olona manao zavatra diso tafahoatra loatra? “araka ny feo nomen-dry zareo ahy, dia nisy fifampiresana tany, ary tena govana mihintsy izany,”hoy ny tenin’ny sefon’ny DAS. Amin’ny fomba firesaka hafa, betsaka no mahafantatra momba ny horanam-peo an-telefonina, sehatra itoeran’ny vahoaka io, fa ny Filoha sy ilay sefo no mody tsy mahafantatra izany.
Arabirabin’I Carmen Posada ny “korontana” misy ao anatin’I Filoha Uribe [es]:
Araka ny tatitry Orwell: mijery antsika foana anie Ra- ZokiBe (Big Brother) e. Tsy avelany mangetotra intsony izao isika raha tsy misy ny toromarika avy amin’I Uribe, tsy avela handefa vaovaom-pianakaviana ho an’ny olon-tiany intsony izao ireo izay mampiasa ny tranok’ala satria mino mihintsy ity tsy valahara ity fa mitetika saritsarina fampihorohorona amin’ny alalan’ny hafatra vita raikipohy isika (codifiee). Tsy mino ny teny tapany voalazan’I Uribe aho izay mahakasika ny olana mihaino resak’olona an-telefonina. Tsy mino aho hoe tsy nanome ny baiko izy, n’inona n’inona milaza dia tsy nahitana porofo na dia iray aza izany, ary tsy mino azy ihany koa aho satria ny olona hany tokana voakasiky ny fanarahana ny lalan’ireo mpanohitra dia ny tenany, izay ikoizana amin’ny fanaovana paik’ady, ary ankoatr’izay dia olona taitaitra/be fialonana be ihany.
Manome fanamarinana ny fangoronam-peo kosa anefa ny mpanao gazety Jaime Restrepo, ao amin’ny Atrabilioso [es] satria ny antony dia ny fifandirana mitam-pitaovam-piadiana anaty, ary manitsy ny fivarotan-gazety Mpampiely ireo tantara miresaka ity horonam-peo an-telefonina ity izy.
Eo afovoan’ny fifandirana anaty toy ity mitranga ao Colombia ity, dia laharana faharoa ihany no ipetrahan’ny marika entina amantarana ireo mpanao politika mpanohitra, ireo mpanao gazety, na ireo mpahay lalana, satria ao anatin’ny tarehin-javatra maro dia rindrina ivelany entina hanakonana ny asa famonoana manohitra ny firenena izy ireo, ary marina fa manohitra ny fitondrana izay mitarika ny iray amin’ireo lafin-kery ho any amin’ny fifandirana.
Raha izay ny fandehan-javatra, dia ho diso ny governemanta raha hampitsoaka andaharana ny fahefana manara-dalana mba ahafahana manadihady ireo olom-pirenena heverina ho mpanakorotana ny firenena tamin’ny alalan’ny fanohanana na fampiasana loharanom-baovao ho tombotsoan’ny andafiny izay miezaka ny handrodana ny filaminana ary handrombaka ny hery amin’ny alalan’ny fomba hafa noho ny fomba ara-demokratika.
Misy hevitra lalina indray ato: ao Colombia dia ireo mahazo ny tombotsoa avy amin’ny horonam-peo an-telefoniana dia ny gazety: anisan’ireo mpitarika tao amin’ny fampielezana savorovoro momba ny fandraisam-peo azo avy amin’ny alalan’ny horonam-peo tsy ara-dalana I Noticias uno [fandaharana: ny alin’ny faran’ny herinandro alefa an-televiziona) sy Semana, ary ireo hafa miaraka aminy.
Manontany tena i Mr Restrepo ny amin’ny fomba entin’ny Semana ka ahazahoany ireo loharanom-baovao avy amin’ny mpiasa ao amin’ny DAS sasany ho eo am-pelatanany, amin’ny fomba ahoana no ahatokisan’ny boky mpiseho isan’andro azy ireo raha toa ka porofo vitsy na tsisy akory aza no miaraka aminy, eny fa na dia ny mikasika ireo fanambarana hita ao anatin’ny andalana aza. Mino izy fa ahitana ahiahy ao anatiny ary mety ho lahatsoratra “natao tsara rindra” entina manohitra ny governemanta ihany izy ity.
Manao ny fampitahana ny savorovoro tao Colombia amin’ny toe-draharaha Frantsa sy Francois Mitterand tamin’ny taonan’ny 1990 ny mpanao gazety Frantsay Jacques Thomet , sefon’ny fandrindrana tao amin’ny AFP:
Toy ireo olona tao Frantsa izay milaza ny fitondrana ao Bogota ho “Jadona” dia mahatsikaritra fa ny fanaovan-gazety ao Colombia dia manana ny fahalalahana misimisy kokoa noho ny anankiray izay nahery vaika …tao frantsa.
Teo ambanin’ny fitondrana sosialita nentin’ny Francois Mitterand, dia nentin’ny efitra miady amin’ny fampihorohoroana izay noforonin’ny Filoha tao Elyse tao amin’ny fireneko ny horonam-peo antelefonina tsy manara-dalana maherin’ny 3000 manohitra ny mpanao gazety sy ny sokajin’olona hafa teo anelanelan’ny taona 1983 sy 1986! Inona ny vokany? Ny feon-gazety ihany no nilaza ny olana tamin’ny taona 1993, noroahin’I Mitterand ny mpanao gazety Belzika anankitelo izay nanontany azy, dia tsy naninona akory ny olo-meloka. […] Ny repoblika akondroakondro, ao Paris ve no ahitana izany sa any Bogota?
Tamin’ny farany, tao amin’ity Tweet [es] ity no namehezan’ny @EIReticente tamina ahiahy, fandisoam-panantenana ary hatezerana:
Tsisy zavatra mahamenatra an’I JMS [Juan Manuel Santos]. [zotra, vao nohavaozina, ho loharanom-baovao mahakasika ny fanantenany hanasarahana an’i DAS] Tsy misy menatra na miotakotaka izany eo e. L*L*Na, firenena vendrana.
Ary, ankoatry ny fanesorana sasany sy ny fihetsika tsy voahevitry ny fanaovan-gazety tahaka ny ao anatin’ny savorovoro hafa ihany dia tsy hisy zava-mitranga izany afaka andro vitsivitsy na afaka herinadro, na dia hoe mampitaha ny olana nisy tamin’ny andron’ny fitondran’I Alberto Fujimon tao Pero tamin’ny taona 1990 aza ny olona sasany . Savorovoro hafa, fanafihana hafa, famonoan’olona hafa, fifanolanana hafa idirana’i Uribe, FARC, ny mpanohitra, na n’iza n’iza lazaina eo, dia hisongadiana ho lohateny lehibe sy resabe ao Colombia.
Soratra miverina: Colombia:Tratra ny fitsikilovana ara-pifandraisana tsy manara-dalana « Aircool’s Blog
[…] Tohiny » http://mg.globalvoicesonline.org/2009/02/26/1738/ […]
07 Jolay 2009, 15:29